Raad Raac News Online – Axmed Godane oo Fariin uu soo diray ugu Hanjabay Dalalka Itoobiya iyo Kenya
Axmed Godane oo Fariin uu soo diray ugu Hanjabay Dalalka Itoobiya iyo Kenya
Faarax December 11, 2012 0
Fariin Maqal ah oo uu soo duubay Amiirka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane ayaa wuxuu kaga hadlay arimo dhowr ah oo kamid ah dalka Kenya iyo Ethiopia.
Axmed Cabdi Godane Fariinta maqalka ah ee uu soo duubay ayaa ugu horeyn wuxuu kaga hadlay dagaalka ee ay kula jiraan ciidamada Kenya.
Wuxuu sheegay in ciidamada Shabaab ay ku guuleesteen inay fuliyaan qaraxyo gudaha dalka Kenya iyadoo ciidamada Dowladda Kenya ay arkayaan qaraxyadaasi ayna iska difaaci waayeen.
Sidoo kale Amiirka Al-Shabaab ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay iska difaacaan cadoowga sida uu isaga sheegay ku soo duulay dalka Soomaaliya iyo diintooda.
Wuxuu sheegay in hadii aysan iska difaacin Shacabka Soomaaliyeed ciidamada Shisheeye ee ku sugan dalka Soomaaliya ay noqon doonaan kuwa marwaliba gacanta ugu jira cadowga sida uu sheegay Axmed Godane.
Waxaa sidoo kale uu fariinta maqalka ah ee uu soo duubay Axmed Cabdi Godane uu ku sheegay in shacabka ku nool dalka Kenya iyo Ethiopia ay ku hoos nool yihiin diin aan aheyn diinta Islaamka.
Isaga oo la dardaarmaya shacabka ku nool dalka Ethiopia gaar ahaan kuwa ku nool Kilinka Shanaad ayaa wuxuu sheegay inay mar un ka bixi doonaan dhibaatada adag ee ay ku jiraan geerida Melez Zenawi kaddib baal cusub ay u furmi doonaan.
Axmed Cabdi Godane ayaa inta badan soo duuba codadka maqalka ah ee uu fariimaha ugu dirayo shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale dalalka deriska la’ah dalka Soomaaliya ee uu Dagaalka kala dhaxeeyo iyadoo Dadka Soomaaliyeedna ay isweydiyaan halka uu saldhigtay Godane.
Al-Shabaab ayaa iminka waxa ay waayeen Gobolo muhiim ah oo soo galay gacanta ciidamada Dowladd Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.